Crush - Crush💗 - Wattpad
အတန်း ထဲ မှာ လူသိပ် မသိ အနေ အေးတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက် ရုပ်ရည် လည်း ပုံမှန် စာလည်း ပုံမှန် ပညာအရည် အချင်းလည်း ပုံမှန် ထူးခြားတာ တစ်ခု မှ မရှိသူ သူနဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက် ကျောင်း ရဲ့ Popular Senior အကို ကြီးကို crush မိသောအခါ ‌နွေးထွေးတဲ့အကို ကြီးလို့ ထင်ထ...
#boylove #funny #myanmar #unilife
အကို့ ရဲ့ နူးညံ့ တဲ့ ၀င် သက် ထွက် သက် က ကျွန်တော့ မျက်နှာ နားတ ဖြည်း ဖြည်း တိုးလာ သည် ။အကို ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ ချို အီ အီ လေးတွေ ကိုတောင် ရသလို အကို ကျွန်တော့်ကို နမ်းတော့ မလို့လား  အကို အဆင် ‌ပြေအောင် နှုတတ်ခမ်း လေး ဆူ ပေး ထားရမလား ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ကျွန်တော်လို အူ ‌ကြောင် ‌ကြောင် ကောင်က kiss ဆို drama ထဲမှာပဲ မြင်ဖူးတာ
မသိတော့ဘူး အကို နမ်းတာတော့ ခံချင်တယ် နမ်းလိုက် စမ်း ပါ crush ကြီးရယ်
မျက် စိစုံမှိတ် နှုတ်ခမ်းကို အသေ ထော်ထားလိုက်တယ်
မျှော် လင့် ထားသလို့ နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းကို မခံစားရ စိုစိစိ ဘာ ကြီးလဲ  လျှာ ကြီးလား
အကိုက ကျွန့်တော့်ကို လျက်?? နေတာလား
WTH! မျက် စိကို အတင်းအားကုန် ဖွင့် ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ အ မြှီး တရမ်း ရမ်း နဲ့ ကျွန်တော့မျက် နှာကို လျှာ နဲ့ လျက် နေ တဲ့ ၀ငတုတ်
"FUCK!!  ငါ့ sweet dream လေး!! အကို နဲ့ ချစ် ကြတော့မှာ လေ အား ခွေးစုတ် ဆင်းစမ်း ဆင်းစမ်း"
အိပ်မက် ကောင်းလေးကို ပြီးအောင် တောင် မမက်လိုက်ရဘူး အား ခွေးစုတ် နေအုန်း နောက်မှ ကိုရီးယားကို ပို့ အုန်းမယ်  ။ ၀တုတ်ကို ကုတင် ပေါ်က အတင်း နှင် ချ ပြီး နာ ရီ တစ်ချက် က်ြည့လိုက်တယ် ။Fuck  ရှစ်နာရီ တောင် ခွဲ ပြီး ပြီ
ဒီနေ့ Sec sem ပြန် စတော့မှာ ကျောင်း ဖွင့်ရင် အကို နဲ့ ပြန် တွေ့ရမှာ တွေ့ ပြီး ညက တော်တော် နဲ့ အိပ်မပျော် အဲ့တော့ ရလဒ်က မနက် ကျ ချီးလို ဖြစ်ရော Phone alarm က ဘာလို့ မ မြည်ရတာ လဲ ။Phone ကို ကြည့်မှ Shit battery မရှိတော့ ဘူး မတတ်နိုင်ဘူး ညက အားသွင်းတာ မ၀င်ဘူးထင်တယ် ကောင်းရော
Power bank ကတော့ အားရှိလောက်ပါတယ်။
၀ရုန်းသုန်းကား အိပ် ရာက ထ ရေ ချိုး ခန်း ထဲ ‌ပြေးဝင်။ အရေးထဲ ခွေးစုတ်က ပိတ်ရပ် နေလို့ ချော် လဲ သေးတယ် နေအုန်း မေမေ မရှိ မှ အဲ့ကောင်ကို ခွေးဂေဟာ ကို ပို့အုန်းမယ် ။မေမေ့ ချစ်သားလေး ဆို ပြီး ဒီကောင်က သခင်ကို လူ မထင်တော့ဘူး။ နောက်မှ ပါဝါ ပြရမယ် ။အခု တော့ ကျောင်းက နောက် ကျ နေ ပြီ မျက် နှာ သစ် သွားတိုက် တော်သေး ယော က်ျား လေး ဖြစ်အောင် မွေးထားတဲ့ မွေး သမိခင်‌ကြောင့် အလှ ပြင် စရာ မလို နို့မို့ဆို ကျွန်တော့လို ငပျင်း ပုံစံ မှုန်သိုးသိုး နဲ့ မိန်းခလေးဆို ဘဲ ရမှာ မဟုတ်။အခုလည်း ရည်းစား မရှိပါ အကို့ကို crush နေရတာ နဲ့မအား။